घुँडा आर्थ्रोसिसको St चरणहरू [घुँडामा ओस्टियोआर्थराइटिस कसरी विकास गर्ने]
Kneartrose को5चरणहरू
06 / 10 / 2018 /0 टिप्पणीहरू/i ओस्टियोआर्थराइटिस (ओस्टियोआर्थराइटिस), गोडा, rheumatism/av भोंड्ट
के तपाईंलाई थाहा छ घुँडाको ओस्टियोआर्थराइटिस कति चरणमा विभाजित छ यो कत्तिको व्यापक छ? घुँडाको जोर्नीशोथ घुँडामा संयुक्त पोशाकको बराबर हो र प्रमुख कार्यात्मक समस्याहरू साथ साथै पीडा पनि निम्त्याउन सक्छ। संयुक्त स्वास्थ्य बिग्रन्छ रूपमा।
हामी उपचार र जाँचको लागि राम्रो अवसरहरू लिनको लागि अर्को पुरानो दुखाई निदान र गठियाको लागी लड्न सक्छौं. हाम्रो FB पृष्ठमा हामीलाई मनपराउनुहोस् og हाम्रो YouTube च्यानल सामाजिक मिडियामा हामीसँग हजारौं व्यक्तिको दैनिक जीवनको सुधारको लागि लड्न सामेल हुन।
यो लेख घुँडाको अस्थिरियाका पाँच विभिन्न चरणहरू मार्फत जान्छ। लेखको फेदमा तपाइँ अन्य पाठकहरूको टिप्पणीहरू पनि पढ्न सक्नुहुन्छ, र साथसाथै घुँडा गठियाले ग्रस्त हुने व्यायामको साथ भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी तलका चरणहरूमा घुँडाको गठिया विभाजन गर्दछौं:
प्रत्येक चरणको अद्वितीय विशेषता र लक्षणहरू छन्। यसको बारे मा तल पढ्नुहोस्।
TIP: धेरै जसो ओस्टियोआर्थराइटिसको साथ प्रयोग गर्न मन पराउछ विशेष रूपले अनुकूलित कम्प्रेसन ग्लोभहरू (लिंक नयाँ विन्डोमा खुल्दछ) हात र औंलाहरूमा सुधार गरिएको प्रकार्यका लागि। यो विशेष गरी रूमेटोलॉजिष्टहरू र जोहरू जीर्ण कार्पल टनेल सिन्ड्रोमबाट पीडित हुन्छन्। सम्भवतः त्यहाँ पनि छ खुट्टाका औंलाहरू og विशेष रूपले अनुकूलित कम्प्रेसन मोजा यदि तपाईं कडा र घाउको औंला द्वारा चिन्तित हुनुहुन्छ भने - सम्भवतः हॉलक्स भल्गस (उल्टो ठूलो औंला)।
यो पनि पढ्नुहोस्: यो तपाईलाई घुँडाको ओस्टियोआर्थराइटिसको बारेमा थाहा हुनुपर्दछ
चरण o घुँडा ओस्टियोआर्थराइटिसको मतलब भनेको घुँडाको सामान्य संयुक्त स्वास्थ्य हो र ओस्टियोआर्थराइटिस वा संयुक्त विनाशको कुनै संकेत देखाउँदैन। चरण ० मा हुनको लागि, घुडाईले पूर्ण आन्दोलनको साथ र आन्दोलनको बखत दुखाइ बिना पनि काम गर्नुपर्छ।
उपचार: ओस्टियोआर्थराइटिस विकासको रोकथाम सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ जब तपाईं चरण ०0मा हुनुहुन्छ र घुडाको स्वास्थ्य राम्रो छ। यस्तो रोकथाम मुख्य रूपमा घुँडा आराम गर्ने मांसपेशीहरूको बलियो बारेमा हो। दुखाइ घाउबाट छुटकारा पाउनका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मांसपेशीहरू भेट्टाइन्छ - आश्चर्यजनक रूपमा धेरैका लागि - हिप मांसपेशीहरू, नितंबहरू र फिलाहरूमा; अनुसन्धान द्वारा दस्तावेज रूपमा (1)। तलका दुई भिडियोहरूमा तपाई राम्रा अभ्यासका उदाहरणहरू देख्नुहुनेछ।
भिडियो: हिपका लागि १० शक्ति अभ्यासहरू (भिडियो सुरू गर्न तल क्लिक गर्नुहोस्)
सदस्यता लिन स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस् हाम्रो च्यानलमा - र दैनिक पृष्ठ, नि: शुल्क स्वास्थ्य सल्लाह र व्यायाम कार्यक्रमहरूको लागि हाम्रो पृष्ठ FB अनुसरण गर्नुहोस् जसले तपाईंलाई अझ राम्रो स्वास्थ्यको लागि मद्दत गर्दछ।
भिडियो: महत्वपूर्ण घुटने आर्थ्रोसिस (6 घुँडाको अस्थिरिया) को बिरूद्ध व्यायाम
यहाँ छ वटा अभ्यासहरू छन् जुन घुँडाको ओस्टियोआर्थराइटिसले प्रभावितलाई ध्यानमा राख्छ। स्थानीय रक्त परिसंचरण कायम राख्न, खुट्टा व्यायामहरूलाई कम गर्न र मेनिस्कस स्वास्थ्य सुधार गर्न यस्ता व्यायाम अभ्यासहरूको नियमित प्रयोग आवश्यक छ। व्यायामहरू पनि निवारक रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
के तपाईंले भिडियोहरू रमाइलो गर्नुभयो? यदि तपाईंले उनीहरूको फाइदा लिनुभयो भने, हामी तपाईंलाई हाम्रो YouTube च्यानलको सदस्यता लिने र सोशल मिडियामा थम्ब्स दिएर हामी वास्तवमै धन्यवाद दिन्छौं। यो हाम्रोलागि धेरै चीज हो। धेरै धन्यवाद!
दैनिक जीवनमा तीव्र पीडा
धेरै व्यक्तिहरू पुरानो पीडाले ग्रस्त छन् जसले दैनिक जीवनलाई नष्ट गर्दछ - यसैले हामी तपाईंलाई प्रोत्साहित गर्दछौं सामाजिक मिडियामा यो लेख साझा गर्नुहोस्, हाम्रो फेसबुक पेज मन नहिचकिचाउनुहोस् र भन्नुहोस्: "हो, लामो दुखा निदानको बारेमा थप अनुसन्धान गर्न"। यस तरिकाले, कसैले यो निदानसँग सम्बन्धित लक्षणहरूलाई थप देख्न सक्ने बनाउन र अधिक व्यक्तिहरूलाई गम्भीरतासाथ लिएको निश्चित गर्न सकिन्छ - र यसरी उनीहरूलाई आवश्यक मद्दत प्राप्त गर्नुहोस्। हामी यो पनि आशा गर्दछौं कि यस्तो बढाइएको ध्यानले नयाँ आकलन र उपचार विधिका बारे अनुसन्धानका लागि बढी रकम प्राप्त गर्न सक्छ।
यो पनि पढ्नुहोस्: - रुमेटिज्मको १ Ear प्रारम्भिक लक्षण
के तपाई रुमेटिज्मबाट प्रभावित हुनुहुन्छ?
घुँडा ओस्टियोआर्थराइटिसको चरण १ मा घुँडा जोड्ने साना डिजेनेरेटिव परिवर्तनहरू देख्न सकिन्छ। पोशाकमा यि परिवर्तनले थोरै क्यालिकेसिकेसन र जोडीमा हल्का परिवर्तनहरू समावेश गर्दछ जहाँ खुट्टाहरू भेला हुन्छन्।
न त यस चरणमा तपाईंले आवश्यक रूपमा घुँडामा दुखाइ वा असुविधा महसुस गर्नुहुनेछ। पक्कै पनि घुँडी ब्रेस को लागी नै होईन, तर वरपरका मांसपेशिहरु र टन्डनले निश्चित रूपमा अरु धेरैलाई चोट पुर्‍याउँछ।
उपचार: व्यायाम र रोकथाम पुनर्वास अभ्यासहरू चरण १ लाई पछिल्लो चरणहरूमा रोक्नको लागि महत्वपूर्ण हुन्। फेरि, अघिल्लो खण्डमा उल्लेख गरिएझैं यो विशेष गरी हिप्स, सिट र जांघहरूको प्रशिक्षण हो यदि तपाईंले घुँडा टेकाउन चाहानुहुन्छ भने तपाईंले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। यदि तपाईंलाई परम्परागत तरिकामा ट्रेन गर्न गाह्रो लाग्छ भने - त्यसो भए हामी सिफारिस पनि गर्न सक्छौं तातो पानी पोखरी मा प्रशिक्षण.
यदि तपाईंले परिवारमा अस्थिरोग र संयुक्त लगाउने घटना बढाउनु भएको छ भने, आहार पूरकहरू जस्तै ग्लुकोसामिन सल्फेट र चन्ड्रोइटिन पनि घुँडा व्यायामको साथ उपयुक्त हुन सक्छ।
यो पनि पढ्नुहोस्: - फाइब्रोमाइल्जियामा तातो पानी पोखरीमा कसरी व्यायाम गर्छ
घुँडा ओस्टियोआर्थराइटिसको चरण २ लाई अझै घुँडामा संयुक्त पोशाकको हल्का रिलीज भनिन्छ। इमेजिंगको साथ, जस्तै एक्स-रे, अब तपाईं घुँडाको जोड़मा अझ बढी संयुक्त पोशाक र क्याल्सिकेसनहरू देख्न सक्नुहुनेछ - तर उपास्थि अझै अक्षुण्ण र ताजा हुनेछ। जब हामी राम्रो कार्टिलेज स्वास्थ्यको बारेमा कुरा गर्छौं, हामी अन्य चीजहरूको बीचमा, मेनसिस्कस र शिन्स र फीमर बीचको दूरीमा उल्लेख गर्दछौं। सामान्य दूरीमा, यी खुट्टाहरू एक अर्काको बिरूद्धमा लुक्दैनन् र रगउँदैनन्, र घुँडा जोड्ने मा सामान्य संयुक्त तरल पदार्थ सामग्री (synovial संयुक्त द्रव) हुनेछ।
यो सामान्यतया ओस्टियोआर्थराइटिसको अवस्था हो जहाँ पहिलो पीडा र लक्षणहरू (ओस्टियोआर्थराइटिसको कारणले गर्दा) देखा पर्दछ। सामान्य लक्षणहरू र सुरुमा पीडा हिड्ने वा टहलमा गएको पछि घुडामा पीडादायी हुन सक्छ, साथै धेरै घण्टा सम्म प्रयोग नगरेको बखत घुडामा कडापन बढ्न सक्छ। स्क्वाटिंग वा तपाईंको घुँडा टेक्नु अझ गाह्रो हुन सक्छ।
चरण २ मा उपचार
फेरि व्यायाम र रोकथामले धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ - र विशेष गरी संयुक्त पोशाकलाई रोक्न र झन् खराब हुँदै जानबाट। यदि तपाईंलाई व्यायाम र अभ्यासको साथ सुरु गर्न गाह्रो लाग्छ भने, हामी तपाईंलाई दृढताका साथ सिफारिश गर्दछौं कि सही व्यायामको साथ सुरु गर्न तपाईंले फिजियोथेरापिस्टको सल्लाह लिनुहोस्। संयुक्त वरिपरि मांसपेशिहरु मजबूत बनाउँदा, घुडा स्थिरता बढ्छ - जो आगे संयुक्त क्षति को संभावना कम गर्दछ।
मोटापा एक समस्या पनि हो कि वजन को असर जोड्ने मा अधिक लगाउन र च्यात्नु को योगदान - र यो नै किन त वजन कम महत्वपूर्ण छ यदि तपाईं एक उन्नत बीएमआई (बॉडी मास इंडेक्स) छ। यदि तपाईंलाई व्यायाम र अभ्यासको साथ सुरु गर्न गाह्रो लाग्छ भने, हामी तपाईंलाई दृढताका साथ सिफारिश गर्दछौं कि सही व्यायाममा सुरू गर्न तपाई एक शारीरिक चिकित्सकको सल्लाह लिनुहोस्।
En घुडा कम्प्रेसन समर्थन (नयाँ विन्डोमा खुल्छ) स्थानीय रगत सर्कुलेशन बढाउँदा घुँडा स्थिर गर्न मद्दतको लागि उपयोगी उपकरण हुन सक्छ। धेरै मानिसहरूले पेन्किलरहरू र एनएसएआईडीहरू पनि लिन थाल्छन् जब तिनीहरूले घुँडा दुख्न थाल्छन्, तर दीर्घकालीन प्रयोगको जोखिमको कारण - जस्तै पेटको अल्सर, हृदय समस्या, मृगौला बिग्रने र कलेजो समस्या - यो हामी सिफारिस गर्दैनौं। यस अवस्थामा यस्तो औषधि प्रयोग तपाईंको जीपीको कडा निगरानीमा हुनुपर्दछ।
यो पनि पढ्नुहोस्: - अनुसन्धान रिपोर्ट: यो उत्तम Fibromyalgia आहार हो
तस्विर वा माथिको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस् फाइब्रो भएकाहरूसँग मिल्ने सहि आहारको बारेमा थप पढ्न।
चरण In मा, घुडाको कोष्ठक मध्यम भएको छ र संयुक्त पहिरन अब धेरै व्यापक हुन सुरु भएको छ। यसको मतलब यो हो कि घुँडा भित्र रहेको ठाउँको अवस्था स्पष्टसँग संकुचित भएको छ र कार्टिलेजले चोटपटकको स signs्केत देखाउँदछ (सामान्य भन्दा चापलसी निचोल्नु सहित)।
यस अवस्थामा यो सामान्य हो कि घुँडाको अस्थिरिया पीडादायी हुन थाल्छ - र हिंड्ने, तल झार्ने, हल्का टेढो पार्ने वा घुँडा टेक्ने जस्ता सामान्य क्रियाकलापले पनि दुखाइ निम्त्याउँछ। अधिक जोडिएको घाँटीको कारणले गर्दा, अब तपाईले घुँडा टेकेर र घुँडाको जोड़मा पनि बढ्न थाल्नुभयो यदि त्यहाँ धेरै तनाव र गतिविधि भएको छ भने।
फेरि, हामी रिंगमा जानेछौं र प्रशिक्षणका लागि प्रहार गर्नेछौं - सही फ्रेमवर्क अन्तर्गत। यो एउटै मात्र तरिका हो तपाईंले घुँडा वरपरका मांसपेशीहरू बलियो बनाउन सक्नुहुन्छ जुन वास्तविक संयुक्त संरचनाहरूलाई राहत दिन्छ - र यदि यो गोलीको रूपमा आएको छ भने, त्यसो भए सबैले त्यो गोली लिने थिए! तर यसको लागि धेरै मेहनत चाहिन्छ, यो सधैं सजिलो हुँदैन।
यस चरणमा, तपाइँको डाक्टरले कोर्टिसोन ईजेक्सनका साथ खोप दिन सुरु गर्न सक्दछ। कोर्टिसोन एक स्टेरोइड हो जुन संयुक्तमा इंजेक्सन गरेपछि (धेरै जसो अवस्थामा) घुँडा जोड्ने पीडा कम गर्न मद्दत गर्दछ। यद्यपि अनुसन्धानले देखाईएको छ कि प्रभाव सामान्यतया दुई महिना पछि कम हुन्छ र लामो अवधिमा त्यस्ता कोर्टिसोन ईन्जेक्सनले गर्दा संयुक्त क्षति बढ्दै जान सक्छ (2)। कडा औषधिहरू पनि सुझाव दिन सकिन्छ, तर दुर्भाग्यवश तयारी जति शक्तिशाली हुन्छ, यसको अधिक साइड इफेक्ट पनि हुन्छ।
अदुवालाई जोर्नी जोर्नी सम्बन्धी रोगबाट पीडित जो कोहीलाई सिफारिस गर्न सकिन्छ - र यो पनि ज्ञात छ कि यो जरामा एक छ अन्य सकारात्मक स्वास्थ्य लाभहरूको एक मेजबान। यो किनभने अदुवाको एक मजबूत विरोधी भड़काउने प्रभाव छ। ओस्टियोआर्थराइटिस भएका धेरै व्यक्तिहरूले चियाको रूपमा अदुवा पनि पिउँछन् - र त्यसपछि अधिमानतः अवधिमा एक पटकमा3पटक सम्म जब जोर्नीहरूमा सूजन एकदम कडा हुन्छ। तपाईं तलको लिंकमा यसका लागि केहि फरक विधिहरू फेला पार्न सक्नुहुन्छ।
यो पनि पढ्नुहोस्: - 8 अदुवा खाने को अविश्वसनीय स्वास्थ्य लाभ
चरण ओस्टियोआर्थराइटिसको पाँचौं र सबै भन्दा व्यापक चरण हो - जो मानिसहरू यस वर्गमा वर्गीकृत गरिन्छ सामान्यतया हिंड्दा वा घुँडाको जोड़मा हिंड्दा धेरै पीडा र असुविधा देखिन्छ। पीडा यस तथ्यको कारण हो कि घुँडाको जोड़को भित्रको वास्तविक दूरी टाढा उल्लेखनीय रूपमा कम र कम गरिएको छ - जसको मतलब यो पनि हुन्छ कि प्राय सबै कार्टिलेज टाढा छ र यसले कडा छोड्छ, लगभग स्थिर, घुँडा जोड।
घुँडा भित्र रहेको ठाउँको कम अवस्थाको मतलब यो हो कि त्यहाँ विभिन्न रचनात्मक संरचनाहरूको बिचमा पर्याप्त घर्षण र घर्षण छ - जसले केवल दुखाइ र लक्षणहरूलाई बढाउन मद्दत गर्दछ। कार्य प्रायः यति कम गरिएको छ कि बिरामीलाई गम्भीर पीडाविना कडा हिंड्न सकिन्छ - र त्यसकारण कठोर उपचार विधिहरू यस समयमा प्रायः विचार गरिन्छ।
शल्य चिकित्सा र प्रोस्थेसिस?
घुँडा प्रोस्थेसिस, या त अर्ध-दाँत वा पूर्ण दाँत, यस्तो व्यापक घुँडा गठिया को लागी एक अन्तिम उपाय हो। यस्तो शल्यक्रिया प्रक्रियामा, सर्जनले सम्पूर्ण क्षतिग्रस्त संयुक्तलाई हटाउनेछ र त्यसपछि यसलाई प्लास्टिक वा धातु कृत्रिम अंगले प्रतिस्थापित गर्नेछ। यस्तो अपरेशनको साइड इफेक्टमा संक्रमण र रगतका थक्काहरू हुन सक्छ। पुनर्वास अवधि सामान्यतया केहि महिना लिन सक्दछ - र यसको मतलब यो हो कि तपाईंले प्राप्त प्रशिक्षण अभ्यास गर्नमा तपाईं धेरै सख्त हुनुपर्छ।
यदि तपाईं घुँडा प्रोस्थेसिसको साथ समाप्त भए पनि, यो जोड दिन जरुरी छ कि तपाईंले अझै राम्रो उपायहरू केन्द्रित गर्नुपर्छ जो राम्रो घुडा स्वास्थ्यमा योगदान पुर्‍याउँछ। - जस्तै सामान्य वजन र विशिष्ट व्यायाम कायम राख्न। हुनसक्छ तपाईले एक स्थानीय फिजियोथेरापिस्ट वा आधुनिक क्यारोप्रैक्टरलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईलाई निश्चित हुनुहुन्न कि तपाईले कस्तो प्रकारको व्यायाम गर्नु पर्ने हुन्छ।
रुमेटिक र दीर्घकालीन पीडाको लागि सिफारिश गरिएको स्वयं-मद्दत
सङ्कुचन शोर (जस्तै कम्प्रेसन मोजे जसले घाउ मांसपेशिहरुमा रक्त संचार बढाउन योगदान पुर्‍याउँछ वा विशेष रूपले अनुकूलित कम्प्रेसन ग्लोभहरू हातमा गठिया लक्षणहरूको बिरूद्ध)
कम्प्रेसन ग्लोभको बारेमा बढि पढ्न छविमा क्लिक गर्नुहोस्।
खुट्टाका औंलाहरू (औंलाहरू छुट्ट्याउन प्रयोग गरियो र यसरी घुमाउने औंलाहरू रोक्न सक्दछ - जस्तै हलाक्स भल्गस, झुम्केको ठुला औंला)
मिनी टेपहरू (गठिया र पुरानो दुखाई भएका धेरैलाई यो अनुकूलित इलास्टिक्सको साथ प्रशिक्षण गर्न सजिलो छ भन्ने लाग्छ)
आर्निका क्रीम वा तातो कन्डिसनर (धेरै व्यक्तिले केही पीडा राहत रिपोर्ट गर्छन् यदि तिनीहरूले प्रयोग गरे, उदाहरणका लागि, अर्निका क्रीम वा तातो कन्डिशनर)
- धेरै व्यक्तिहरू कडा जोड्ने र दुखाइको मांसपेशिको कारण दुखाइको लागि आर्निका क्रीम प्रयोग गर्दछन्। कसरी भन्ने बारे मा पढ्न माथिको छविमा क्लिक गर्नुहोस् arnicakrem तपाइँको दुखाई अवस्थाबाट केही राहत पाउन मद्दत गर्न सक्छ।
यो पनि पढ्नुहोस्: - हल्दी खाने को F काल्पनिक स्वास्थ्य लाभ
फेसबुक समूहमा सम्मिलित हुनुहोस् «संधिवात र दीर्घकालीन पीडा - नर्वे: अनुसन्धान र समाचारHe (यहाँ क्लिक गर्नुहोस्) अनुसन्धान र मिडिया लेखन को बारे मा नवीनतम अपडेट को लागी rheumatic र जीर्ण विकार को बारे मा। यहाँ, सदस्यहरूले पनि मद्दत र समर्थन लिन सक्दछन् - दिनको सबै समयमा - आफ्नै अनुभव र सल्लाहको आदानप्रदानको माध्यमबाट।
हामी आशावादी छौं कि यस लेखले तपाईंलाई गठिया विकार र दीर्घकालीन पीडा बिरूद्ध लड्न मद्दत गर्दछ।
फेरि, हामी चाहन्छौं यस लेखलाई सोशल मिडियामा वा तपाईंको ब्लग मार्फत साझेदारी गर्न राम्रोसँग सोध्नुहोस् (लेखमा सिधा लिंक गर्न स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस्)। पुरानो दुखाई भएकाहरूको लागि बुझ्नु र ध्यान केन्द्रित गर्नु दैनिक जीवनको लागि उत्तम कदम हो।
अगाडि साझेदारी गर्न यसलाई छुनुहोस्। एउटा ठूलो सबैलाई धन्यवाद छ जसले पुरानो दुखाई निदानको बृद्ध समझ बढाउन मद्दत गर्दछ!
र यो पनि याद गर्नुहोस् यदि तपाईंलाई लेख मनपर्‍यो भने:
(अनुसरण र टिप्पणी गर्नुहोस् यदि तपाईं हामीलाई व्यायाम वा तपाईंको समस्याको लागि स्ट्रेचको साथ भिडियो बनाउन चाहानुहुन्छ भने)
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/de-5-stadiene-av-kneartrose.jpg?media=1648573622 368 700 भोंड्ट https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 भोंड्ट2018-10-06 09:02:332021-03-24 14:47:04Kneartrose को5चरणहरू
8 वात रोगको विरुद्ध प्राकृतिक एंटी-भड़काऊ उपायहरू Te ओस्टियोआर्थराइटिसको प्रारम्भिक लक्षण